mushaTURKEYCentral Anatolia Region38 KayseriErciyes Akavaraidza Makumi makumi mairi Anoshanya kubva ku53 Maguta
erciyes aivaraidza vashanyi chiuru kubva kuguta pakupera kwevhiki
Erciyes Winter Tourism muTurkey flagship pakupera kwevhiki 53 zviuru vashanyi kubva 90 mumatunhu akapoteredza kuTurkey kuti kuvaraidzwa. Nhamba yepamusoro yevashanyi veku Erciyes kubva kunze kweguta yakazoonekwa kubva kuIstanbul, Ankara, Antalya naAdana.
Alpine dzakatenuka mu mureza, aiva kwezvivako uye superstructure, zvemaziso zvivako, noungwaru zvigadzirwa, pekugara uye yokufambisa zvivako zviri kuwedzera nerimwe gore mamwe kufarira Turkey kuti Erciyes hunonyanya dzakabudirira mumwe muEurope kutungamirira state plesieroorde.
Turkey kunyanya kumativi Istanbul, Izmir somunhu mumwe-awa kutiza Via mhepo; Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Mersin, Konya, Nevsehir, Nigde, Sivas, Aksaray, Kirsehir, Gaziantep, kunyanya mumatunhu akavakidzana umo nzira yekufambisa ipfupi, kunyanya kubva kumaguta edu uye kubva kunharaunda yese inofarira Erciyes.
Erciyes, iyo yaive yakazara mafashama nevanhu vekunze uye vekunze vhiki yega yega, yaive yakazara futi vhiki ino. Mune paruzhinji mota paki kuverenga 1500 mota yekutanga Istanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Hatay, Gazi Antep, Kahraman Maras, kusanganisira Aydin, Balikesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Canakkale, Corum, Denizli, Edirne, Erzurum, Sakarya, Tekirdag kusvika pakasvika mota kubva kumatunhu makumi mana nemashanu yakakwezva.
Kunyange makumi matanhatu muzana muzana emotokari dziri mumakomo kubva kuKayseri guta, 45% iri kubva kunze kweguta. Zvinoenderana nedata rakawanikwa nekuda kwekuverenga mota gumi nemashanu kubva ku Erciyes, zvakatemwa kuti mota 55 dzaibuda kunze kweguta dzakabva kuIstanbul. Ankara yaive yechipiri nemotokari makumi maviri nemaviri uye Adana aive wechitatu aine mota 1500. Antalya 250, Nevsehir 203, Mersin 113, Konya 53, Aksaray 47, Nevsehir 44, Nigde Erciyes akawana makumi maviri emotokari. Anenge Svondo yega yega mu Erciyes, pane kutenderera kwemotokari dzinosvika zviuru gumi dzinosanganisira mota, mavhoti evashanyi uye mabhazi ekushanyira. Zviuru zvevagadziri vezororo kubva kuKayseri uye mamwe maprovince vanonakidzwa pakumhanya-ski nematanho akasiyana akaoma, pamwe nekushambidzira.
Erciyes Ski Center, inova nzvimbo yepasi rese nemasevhisi anopihwa, iri kudiwa zvakanyanya nevashanyi vemuno pamwe nevashanyi vekunze vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzepasi. Kune ndege dzakananga kubva kuKayseri, Russia, Ukraine, Belarus nePoland kuenda kuKayseri vhiki rega rega. Kunze kwekutungamira ndege ku Erciyes, ndege dzakarongwa kubva kunyika dzakasiyana siyana kupota nyika, huwandu hwevashanyi vekunze vanofamba vachifambisa muE Erciyes huri kuwedzera gore rega rega nemhuri yavo, shamwari uye mapoka kubva kuGermany, Italy, America, England, Korea, Malaysia uye France.
Denizli Ski Centre inokwana 5 vanhu vane zviuru zvekupera kwevhiki
16 yakagamuchira zviuru zvevakashanya kubva kuMarmaray kusvika nhasi
Eurasia Rail Fair, 11 bin 949 yakagamuchira vashanyi
Tünektepe Teleferik uye Social Facilities 7 Yakagadzirwa 260 Zviuru zveVashanyi pamwedzi
Kocaeli Intercity Bhazi terminal Mahosi 42 Zviuru zveVashanyi
Weekend Fertility paEriciyes Ski Resort
Weekend yakasimba muErciyes
Erciyes akaputsa zvinyorwa zviviri zvakasiyana pamusi wevhiki
8. Eurasia Rail Fair Yakagadzirwa 12.322 Vashanyi Vakagadzwa naImir
Turkish Airlines Sayansi Expo Yakachengetedzwa Pamusana pevashanyi 200
Ordu Çambaşı 15, iyo itsva yaidiwa yepashamba yekutambira, yakagadzirirwa vanhu vane chiuru
2014 yakagamuchira zviuru zvevatasvi paMerzifon Airport 140